okirikiri zuru ike: Ndị aghụghọ nka mgbagwoju anya kwa ụbọchị&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Ihe mgbagwoju anya Circle Relax block na-ebunye egwuregwu mgbagwoju anya ihe mmịfe riri ahụ. Kpatụ ma ọ bụ slide taịlị ndị ahụ iji dozie egwuregwu mgbagwoju anya. Gwuo site na iji ọmarịcha foto agwaetiti ebe okpomọkụ arụrụla, ma ọ bụ mepụta mgbagwoju anya na-akparaghị ókè. Kedu ngwa ngwa ị nwere ike mezue egwuregwu ahụ?
Atụmatụ ezumike gburugburu:
• Ngụ oge egwuregwu ma na-akpali stats counter iji tụọ ọganihu nka.
• Ihe ngosi egwuregwu egwuregwu efu na-emelite kwa ụbọchị!
• Karịrị 1000 mara mma elu-definition mgbagwoju anya!
• Ngwungwu egwuregwu mgbagwoju anya ọhụrụ nwere ọrụ pụrụ iche nke ndị na-ese ihe!
• Ọrụ nkwụsịtụ n'ime egwuregwu.
• Ọtụtụ ọkwa isi ike.
• Na-arụ ọrụ na ihe karịrị otu mgbagwoju anya n'otu oge wee hụ ọganihu gị!
• Hụchalụ foto nka emechara iji nyere gị aka dozie ya!
• Taịlị na-adaba nke ọma na ngwa ngwa banye ebe.
• Ọnọdụ ntụgharị maka ezigbo jigsaw egwuregwu mgbagwoju anya! Bugharịa iberibe n'ìgwè!
• Nnukwu nchịkọta egwu: họrọ egwu egwu kwesịrị ekwesị ka ọ dabara na ọnọdụ gị!
• Njikwa dị mfe na-eme ka ọ dị mfe iji dozie mgbagwoju anya jigsaw!
Ma enwere atụmatụ ndị ọzọ ị ga-achọpụta! Ị nwere ike ịmepụta egwuregwu mgbagwoju anya ahaziri iche n'ụzọ dị mfe! Na mgbakwunye, ị nwere ike họrọ egwu kachasị amasị gị site na mkpokọta egwu egwuregwu iji soro izu ike gị, nnọkọ foto nka na-ebelata nchekasị!
Na Circle Relax ị nwere ike ịgagharị gburugburu ụwa, lee ọmarịcha ala ala, nweta oge nke afọ na ihe ebube nke ụwa, niile site na udo na jụụ nke ụlọ nke gị.
Anyị ekepụtala ngwa a ka ị nwee ike ịme egwuregwu ọkacha mmasị gị n'ebe ọ bụla na oge ọ bụla. Ọ na-egosipụta nke ọma ezigbo egwuregwu egwuregwu jigsaw na, n'otu oge ahụ, ngwa ahụ na-eji uru ya niile mee ka egwu egwuregwu kachasị amasị gị dị ka ọ dịlarị kwere omume.
← Oge egwuregwu poppy Huggy Wuggy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ogbenye Agwo: Ị nwere ike inyere ya aka Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →